काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। कोइराला स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि शनिबार डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले जनाएको छ।
उनमा भदौ २३ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोनाबाट संक्रमित कोइरालालाई ज्वरो बढेपछि मंगलबार राति चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उनको चार दिन अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिएको थियो।
स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएपछि कोइराला शनिबार अपरान्ह निवास फर्केका हुन्। उनका स्वकीय सचिव भरत तिवारीका अनुसार स्वास्थ्यमा सुधार भइसकेकाले एक हप्ता होम आइसोलेशनमा बस्ने गरी उनलाई हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरिएको हो।
कोइरालालाई निमोनियाको शंका लागेपछि मंगलबार साँझबाट प्यारासिटामोल दिएर आईसीयूभित्रको आइसोलेसनमा चिकित्सकीय निगरानीमा उपचार गरिएको थियो। अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टरसमेत रहेका सिनियर कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन डा. विश्वनाथ कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको चिकित्सक टोलीले महामन्त्री कोइरालाको उपचार गरेको थियो।
डा कोइरालाले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे नियमित चासो र चिन्ता लिने तथा उपचारमा संलग्न डा. विश्वनाथ कोइरालाको टिमलाई धन्यवाद दिएका छन्। चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम केही दिन होम आइसोलेसनमा रहने उनले जनाएका छन्।